Vicky Ford: "Dowlada UK waxay si buuxda u taageersan tahay RW Rooble iyo Shirka Golaha..." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Vicky Ford: "Dowlada UK waxay si buuxda u taageersan tahay RW Rooble iyo Shirka Golaha..." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Vicky Ford: “Dowlada UK waxay si buuxda u taageersan tahay RW Rooble iyo Shirka Golaha…”
Waxay dhammaan dhinacyada Soomaalida ugu baaqday inay ka fogaadaan falalka kicinta iyo iska ilaaliyaan rabshadaha.
Go’aanka dowladda Ingiriiska ku taageeray Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya ayaa yimid kadib tallaabo tan la mida oo uu qaaday Mareykanka, markii madaxda Afrika ee Wasaaradda Arrimaha dibadda Mareykanka si cad ugu sheegtay Farmaajo inuu la shaqeeyo Ra’iisal wasaaraha.
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo si weyn loogu soo dhoweeyay Muqdisho (Sawirro)
Next articleDagaal ka socda Magaalada Beledweyne iyo Wararkii ugu danbeeyay…